Dhaqaatiirta deg dega ee caafimaadka oo u gurmaday dabagaale madaxa uu u galay koob laga cabay yoghurt – The Voice of Northeastern Kenya
Dhaqaatiirta deg dega ee caafimaadka oo u gurmaday dabagaale madaxa uu u galay koob laga cabay yoghurt
starfmke August 15, 2016
Dhaqaatiirta gurmaadka deg dega ee magaalada Connecticut ee ku taalo koofur England ayaa waxa ay gurmad u fidiiyen dabagaale oo madaxa la galay koob laga cabay cabitaanka yoghurt waxana dhaqaatiirta video laga duubay iyago la tacaalayo xaalada buukankan aan caadiga ahayn kaas oo ahaa mid argagaxsan oo madaxa uu ugu jiro koob laga dhameeystay cabitaanka yoghurtka.
Videoga ayaa waxa ka muqday dhaqaatiirtan oo isku dayaayay in ay dabagaalahan qabtaan iyago u adeegsanaayo buste.
Dabagaalahan ayaa waxa u ka argagaxay marki u wax arki waayay waxana u ahaa mid iska bod bodaayay oo marba meel ku dhacaayay.
Kadib marki ay dhaqaartiirtan ay muddo ku qoslaayen ayaa waxa ay ugu dambeynti ku guuleysteen in ay u gar gaaran dabagaalahan la dala dhacaayay kadib marki ay xaladaas ahayd in u madaxa la galay koobka yoghurtka ay ku timid.
Waxana ugu dambeynti videogas ka muqday dabagaalihi oo marki laga bixiyay koobka yoghurtka oo isla markaasina xornimaadiisa uu dib u helay isago cagihiisa wax ka dayay isagonan xita oranin dhaqaatiirti u soo gurmaday waad mahadsantihiin.
← Nin iyo gabadhiisa oo ay dadweyne dileen
Firkrada kala duban oo laga bixinayo tilaabadii ay gudiga IEBC ku xadiday dhaqaalaha loo isticmaalo Ololaha doorashada →
2 thoughts on “Dhaqaatiirta deg dega ee caafimaadka oo u gurmaday dabagaale madaxa uu u galay koob laga cabay yoghurt”
Najah mahmud mahamud says:
Inaba cadi ma aha dhaqatirta wey ugargaren
Name.Najah mahmud mahamud says: